Apple weputara nkwuputa izizi nke Macbook Pro ohuru ya na ihe kacha mkpa Esi m mac
Ngwaahịa ọ bụla na-aga n'ahịa ga-ebu nkwado mgbasa ozi na ihe ọhụrụ 2016 Macbook Pro agaghị adị obere. N'ikwekọ na mmalite nke mgbasa ozi ekeresimesi, Apple ewepụtala kọmpụta ọhụrụ ya na ọha na eze na onye isi ihe nkiri bụ ọhụrụ OLED mmanya mara dị ka Aka Ogwe.
Vidio ahụ na-ejikọ ihe ndị na-egosipụta Apple, dị ka: ike ike, ihe onyonyo na ozi sara mbara. Ihe niile a jikọtara ya na abụ olu ụtọ na, ọ bụ ezie na ọ bụ obere kpochapụwo, na-enye ya mgbatị na ike naanị dị ka Macbook kwesịrị. Onye ọ bụla chọrọ ịmata ya, ọ bụ mpempe ama ama ama ama "William Tell Overture"
Vidio ahụ na-egosi ọnụọgụ ọkụ na-enweghị ngwụcha nke ha ji eme ihe atụ: Oriọna oriọna dị ka echiche, dị ka echiche, dị ka mgbanwe, dị ka ịmepụta ihe ọhụrụ ma ọ bụ na-adọrọ mmasị. Vidio ahụ bụ ịchụso ọkụ ọkụ ọkụ nke na-enwu gbaa, elu, ma gbawaa. Ọ bụ ihe atụ na site na nke kachasị nta (ihe oyiyi nke mpempe akwụkwọ dị mfe, ọkụ eletrik, ọkụ na-eji) enwere ike gbanwee ya na nke kachasị ukwuu.
N'ịgbaso atụmatụ nke ọkwa ndị ọzọ, ọkachasị metụtara ngalaba akpaaka, Mac a tụrụ anya na-egosi naanị na njedebe, na ndabere ojii nke na-enye ya nghọta. Igwefoto ahụ wee banye ruo mgbe ị hụrụ Mac na ihuenyo niile. N’elu enyo gị, bọlb nke yiri nke gara aga ga-egosi na usoro nke ọkụ bọlbụ ahụ na-aga n’ihu. Mgbe ahụ mkpịsị aka na-amalite ịrụ ọrụ Ogwe aka ma na-agagharị na-apụta na usoro nke bọlbụ ọkụ, nke na-enwu ruo mgbe ọ gbawara.
A na-emeghachi ihe a ọtụtụ ugboro, ka gosi onye nkiri ahụ ịdị mfe nke iji ya na oke mmiri nke ihe onyonyo na Touch Bar. Anyị na-elele na mgbasa ozi na enweghị ụdị jerks ọ bụla ma ọ bụ na-agbaze ihe oyiyi ahụ, dị ka anyị hụrụ na isi okwu ikpeazụ.
Dị ka ikpe ikpeazụ, Apple kwuru, sị:
Echiche na-akpali ụwa. Anyị na-ewetara ngwa ọrụ iji mee ka echiche niile bụrụ eziokwu. Ihe ohuru MacBook Pro.
Otu ọnwa zuru ezu nke mgbasa ozi Apple na-echere anyị ịkụziri anyị omume ọma nke ngwaọrụ ọhụrụ ahụ ga-atọ ụtọ karịa otu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Apple weputara nkwuputa izizi nke Macbook Pro ohuru ya na ihe kacha mkpa
Upps !!! Daalụ Juan Vicente, karịa nke niile ọ na-ada ka uwe.
Ngwa na-ebipụta na gị blog si Mac